Meydka madaxweynihii hore oo berri la keenayo Muqdisho - Jowhar somali news leader
Home NEWS Meydka madaxweynihii hore oo berri la keenayo Muqdisho
Meydka madaxweynihii hore oo berri la keenayo Muqdisho
Guddiga loo xil saaray aaska Allaha u naxariitee, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Cali Mahdi Maxamed, ayaa sheegay in maalinta berrito ah la keeni doono meydka madaxweynaha laguna aasi doono magalaada Muqdisho.
Mudane,Cumar Maxamed Maxamuud, guddoomiyaha gobolka Banaadir oo guddigaas kamid ah ayaa sheegay in shaqada guddiga ay tahay diyaarinta hab-maamuuska dowliga ah ee aaska qaran ee loo sameynayo madaxweyne Cali Mahdi Maxamed.
Allah u naxariitee, Cali Mahdi Maxamed ayaa ku geeriyooday xalay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo da’diisu tahay 83 sano jir.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi ka kooban 11 xubnood oo ay kamid yihiin; wasiiro, xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir u xil saaray qaban qaabada aaska Allah u naxariitee, Cali Mahdi Maxamed.
Previous articleThe Moroccan government supports the legalization of cannabis for medical use
Next articlePrince William says the British royal family “is very much not racist”